Abenzi be-Graphite Electrode | China Umsizi i electrode Factory
I-graphite anode plate ye-electrolysis
Esitokisini se-electrolytic, i-electrode lapho okugeleza khona manje ku-electrolyte kubizwa ngokuthi i-graphite anode plate. Emkhakheni we-electrolytic, i-anode ngokuvamile yenziwa ipuleti lokuma, ngakho-ke ibizwa ngokuthi i-graphite anode plate. Isetshenziswa kakhulu ekukhetheni i-electroplating, amanzi angcolile, imishini yokulwa nokugqwala kwezimboni noma njengezinto ezikhethekile. Ipuleti le-graphite anode linezici zokumelana nokushisa okuphezulu, ukuqhuba kahle kanye nokuqhuba okushisayo, imishini elula, ukuqina kwamakhemikhali okuhle, ukumelana nokugqwala kwe-acid ne-alkali nokuqukethwe komlotha ophansi. Ingasetshenziselwa isixazululo se-electrolyzing aqueous, okwenza i-chlorine, i-caustic soda, nokwenza i-alkali kusuka kusixazululo sikasawoti se-electrolyzing. Isibonelo, ipuleti le-graphite anode lingasetshenziswa njenge-anode eqhubayo yokwenza i-caustic soda kusuka kusixazululo sikasawoti se-electrolyzing.
Imboni entsha yamandla
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-graphite kuyinsimu esemqoka emandleni amasha, ikakhulukazi ezimbonini ezihlobene nezimoto.